Afhayeenka Booliska Kenya, Charles Owino [Sawirka: NATION MEDIA GROUP]
NAIROBI, Kenya - Booliska Kenya ayaa soo saarey digniin cusub oo dhinac amaanka la xiriirta taasi oo ku saabsan suurt-galnimada in Al Shabaab ay weeraro ka fuliso dalkaasi inta lagu gudah jiro bisha barakeysan ee Ramdan-ka.
Saraakiisha amniga ayaa sheegay inay heleen macluumaad sir ah oo ku saabsan in Al Shabaab ay qorsheynayso inay magaalooyin kala duwan oo kamid ah Kenya ay ka fuliso weeraro argagaxiso.
Booliska ayaa ugu baaqay shacabka Kenya ay muujiyaan feejignaan dheeri ah marka ay joogaan goobaha dadweynaha isagu yimaado [public places] sida hoteelada, Kaniisadaha, meelaha Baabuurta laga raaco iyo Iskuuladda.
"Inkastoo awood Al Shabaab la wiiqay, waxaan helnay xog sirdoon oo muujinaysa in Kooxdan ay qorsheynayso weeraro kale inay ka fuliyo dalka," ayuu yiri Charles Owino oo ah sarkaal katirsan Booliska.
Meelaha sida weyn looga cabsi qabo inay ka dhacaan weerarada Al Shabaab ayaa waxaa kamid ah gobolka xeebta iyo deegaanada ku dhaw xadka Soomaaliya iyo magaalooyin ay Nairobi kamid tahay.
Charles Owino ayaa sheegay in Al Shabaab iyo kooxaha kale ee argagaxisda sida Daacish ay horey usoo saareen Fatwooyinka [Bayaan diimeed] ay ku baaqayaan in la kordhiyo weerarada int alagu guda jiro Ramadan-ka.
Booliska, si kastaba waxuu ugu laab-qaboojiyay shacabka Kenya in ay si dhaw ula socdaan dhaq-dhaqaaqa xadka Soomaaliya si looga hortago isku dayga Al Shabaab ku doonayso inay weeraro uga fuliso dalkaasi.
"Waxaan u xaqiijinaynaa shacabka in Hay'adaha amaanka ay ku jiraan feejignaan sidoo kalena ay isha ku hayaan dhaqdhaqaaqa xuduuda Soomaaliya iyo Kenya," ayuu hadalkiisa raaciyay Charles Owino.
Charles Owino ayaa ku faaney in weeraradii Al Shabaab ee Kenya ay hoos u dhaceen sababtoo ah dedaallada ay muujiyeen Ciidamada amaanka oo taageero ka helaya shacabka dalkaasi.
Dad laga shakisan yahay
Afhayeen u hadlay Booliska ayaa sheegay in ay qabteen qaar kamid ah 8 ruux oo labo todobaad kahor ay shaaciyeen inay ku raadgoogaan kuwaasi oo qorsheynayay inay falal amni darro ka geestaan dalka Kenya.
Sideeda qof oo magacyadooda lagu kala sheegay Isxaaq Aliyow Maxamed, Raxiim Maxamed Sheekh, Bashiir Hareed Xuseen, Bashiir Aadan Cismaan, Cabdirashiid Ibraahim Cismaan Nuur, Siyaad Ibraahim Cabdulle, Cabdi Axmed Ibraahim iyo Maxamed Axmed ayaa la duldhigay lacag gaaraysa Sh16 million.
Booliska ayaa digniintan soo saarey 5 maalmood kadib markii Al Shabaab ay 4 qof oo ahaa kuwa macdanta qoda ku dishay weerar ay ka fulisay deegaanka Shimbir Fatuma oo katirsan magaalada Mandheera.
Sidoo kale, Al Shabaab ayaa 9 askari ku dishay duleedka degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose maalintii Axada ahayd ee lasoo dhaafay, kadib weerar qarax miino loo adeegsaday oo ay ku qaadey Kolonyo ay la socdeen.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa cambaareeyay weerarka, isagoo dhanka kale sheegay inuusan waxba u dhimeynin howlgalka Ciidamda Kenya ee Soomaaliya.